Nnukwu Ụlọ Elu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nnukwu Ụlọ Elu - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nnukwu Ụlọ Elu)
PVC Rapid gbagote n'Ọnụ Ụzọ
PVC Roller Shutter High Speed ​​Door Ụlọ elu awara ahazi na-enye nchebe dị elu karị mgbe arụnyere na mmalite oghere. Nnukwu Ụlọ Elu Roller Door na-arụ ọrụ na ọsọ ọsọ nke 800mm / s na 1000mm / s. Ọnụ ụzọ meghere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya, ma ọ na-emechi akpaghị aka ozugbo oghere ahụ doro anya. Ụlọ...
PVC akwa akwa ọsọ na-emeghe ọnụ ụzọ
Ọnụ ụzọ dị elu T ọ ngwa ngwa stacking ụzọ nwere ọrụ dịgasị iche iche ndị dị otú ahụ dị ka okpomọkụ ichebe, oyi na-atụ ichebe, ụmụ ahụhụ na ihe àmà, windproof, dustproof na soundproof. A na-etinye ya n'ọtụtụ ebe na- adọba ụgbọala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nri, textile, ngwá electronic, mbipụta na nkwakọ ngwaahịa,...
Ọnụ ụzọ na-agba ọsọ ngwa ngwa nke Turbine
Ọnụ ụzọ na-agba ọsọ ngwa ngwa nke Turbine A na-akpọkwa ụzọ ngwa ngwa ọnụ ụzọ dịka aluminum alloy ngwa ngwa, na-ezo aka dị ka ndị na-ekpuchi windo. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ọnụ ụzọ ngwa ngwa nke nwere mgbochi na ịchọta oke okpomọkụ. Ọ nwere ike ịtụkwasị obi, dị irè ma dị mfe ịrụ ọrụ. N'iji usoro zuru ezu, isi bụ DSP...
PVC Freezer Zipper Ụlọ Ọrụ
PVC Freezer Zipper Ụlọ Ọrụ Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara arụmọrụ nke nkwekọrịta ijikọta nkwụsịtụ. Mgbe a na-emetụta ozu ahụ n'ụzọ na-enweghị isi, ọ na-apụ na egwu ahụ ma...
PVC arụmọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
PVC arụmọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara arụmọrụ nke nkwekọrịta ijikọta nkwụsịtụ. Mgbe a na-emetụta ozu ahụ n'ụzọ na-enweghị...
Nnukwu Ụlọ Elu Nnukwu Ụlọ Elu Elu Nnukwu Ụlọ Elu Dị Elu Nnukwu Ụlọ Elu Roller Door Nnukwu Ụlọ Nzukọ Kasị Elu Nnukwu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Oghere Ụlọ Elu Nnukwu Ụlọ Elu Na-eguzogide Nzuzo